केन्द्रीय समितिका कस्ता विषयहरु उठिरहेका छन् ?
पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीको सचिवालयले दिएको एजेन्डाहरुको वरिपरि नै रहेर विषयवस्तु उठ्ने हुन् । अरु उठेका एजेन्डाहरु सुझाव, ज्ञान र जानकारीका रुपमा आउन सक्ने भए । तर निर्णयमा ती विषयहरु जान सक्ने भएनन् । किनभने एजेन्डा पहिले नै बाँडिसकिएको थियो । त्यसैले राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधनका प्रस्तावहरुमाथि विभिन्न समूहमा भएका छलफलका निष्कर्षहरुलाई सुनाउने क्रम जारी नै छ । अरु दुई तीनवटा समूहको बाँकी छ । त्यो आइसकेपछि र्‍यापोर्टिङको पनि व्यवस्था छ । त्यसपछि नेताहरुले संश्लेषण गर्नुहुन्छ । सायद बैठकको अन्त्यमा मूल नेतृत्वले त्यसको बारेमा जवाफ दिने वा उहाँहरुलाई आश्वस्त बनाउने र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुको चासो, चिन्ता, सरोकार र सुझावलाई सम्बोधन गर्ने काम नेतृत्वले गर्छ ।
केन्द्रीय सदस्यहरुको चासो र रुचि कस्तो पाउनु भयो ? कस्ता विषयहरु बढी उठिरहेका छन् ?
सरकार र पार्टी दुवैका बारे सुझाव, आलोचना र टिप्पणीहरु छन् । त्यहाँ उत्साह र गर्नुपर्ने कामहरुमा दिशानिर्देशका कुराहरु छन् । जुन कुरा प्रतिवेदनमा पनि छन् । तिनै कुराहरुको वरिपरि रहेर विषयहरु उठेका छन् । त्यसैले एउटा बैठक हुँदा स्वभाविकरुपमा त्यहाँ राम्रो राम्रो कुरा मात्रै आउँदैन । कमजोरीहरु पनि केलाइन्छ । असल कुराहरु पनि गरिन्छ र सरकारले गरेका निकै उल्लेख्य प्रगतिहरुलाई अझ संश्लेषित गर्न नसकेको हो कि ? पार्टी पंक्तिको एकताको प्रक्रिया आमरुपमा नटुंगिएको कारणले, जनसंगठनहरुको काम त्यति राम्रो भइनसकेको कारणले पनि यति धेरै भइरहेका उपलब्धिहरुलाई पनि हामीले प्रचार गर्न सकेनौं कि भन्ने गुनासाहरु पनि छन् । जसले गर्दा जनमानसमा कतै अन्यौल छन् कि भनेर सचेत हुनुपर्ने आवाजहरु पनि त्यहाँ उठिरहेका छन् ।
तपाईं सरकारको मन्त्री पनि हुनुहुन्छ ? उठेका विषयहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ?
सम्बोधन गर्ने विधि त्यही दुईटा हो । उठेका सबै विषयहरुलाई नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र कमजोरी छन् भने त्यसलाई दृढतापूर्वक सच्याउनुपर्छ । असल कुरा गरिएको छ भने त्यसलाई अरु बाँकी कार्यकर्ताहरुले बोकेर हिंड्नुपर्छ । किनभने पार्टीमा आत्मभर्त्सनाको प्रक्रियालाई निरन्तर जारी राखियो भने आउने चुनावहरुमा उपलब्धिहरुलाई पनि अरुले खोस्ने, अरुले मुद्दा बनाउने हुनसक्छ । यति ठूलो गल्ती नेकपाको सरकारले गरेको छैन ।
जस्तो- मौलिक हकको कुरा भयो, नीतिगत संचरनाको कुरा भए, कानून निर्माणका कुराहरु भए, अरु केही आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका विषयवस्तुहरु भए । लगानी समिटका कुराहरु भए । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरुलाई सुदृढीकरण गर्ने कुराहरु भए । अभूतपूर्व कुराहरु भएका छन् । र, अहिले हामी एउटा आधारविन्दूबाट उठेर अब क्रमशः यसका परिणामहरु देखिने चरणमा हामी आउँदैछौं । त्यसैले पार्टी पंक्तिले पनि गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ । सतही आधारमा विश्लेषण गर्नुहुन्न भन्ने कुरा नै आउँछ र हुन्छ । त्यही हो पार्टी चल्ने विधि नै त्यही हो । त्यसैले विषय उठ्नासाथ यो पार्टी सकिन्छ, वा दोहोलो काडिन्छ नेतृत्वको वा अर्को नेतृत्व खोजिन्छ । यो सम्भावना छैन र हुन पनि सक्दैन । त्यसो भएकोले यो पार्टीको एकता जुन उचाइबाट जुन गहिराईबाट भयो त्यसको मूल मर्म, भावना, स्पिरिट र त्यसका युगीन चुनौतिहरु र कार्यभारहरु पूरा गर्न पार्टीहरु हुन्छन् ।
पार्टी कसैलाई रहर लागेर बन्ने, विघटित हुने वा विश्रृंखलित हुने वा टुट्ने भन्ने हुँदैन । त्यसैले पार्टीको यो आम कुरा हो । फेरि नेकपा भनेको एउटा यस्तो चिज हो जो धेरै लामा श्रृंखलाहरुद्वारा टुट, फुट, विभाजन, एकता, रुवाबासी, खुसी, हाँसो हेर्दाहेर्दै सबै चिज गुमेको, अनि फेरि धूलो टक्टक्याउँदै उठेर फेरि एकताद्वारा शक्ति आर्जन गरेको । यी सबै कुरा त यो नेतृत्वले बुझेकै छ । जहाँ नेतृत्व पुञ्जको एउटा अर्को भागको रुपमा केन्द्रीय समिति छ । त्यसैले केन्द्रीय समितिमा विभिन्न विचारहरु आउँछन् । व्यक्तिगत विचार पनि हुन्छन्, त्यसलाई पार्टीले संस्थागत गर्छ । जसलाई दस्तावेजीकरण गरिन्छ ।
नेतृत्वले कुरा सुन्छ भन्नुहुन्छ तर, पार्टी अध्यक्ष नै बैठकमा हुनुहुन्न । कसरी सुन्नुहुन्छ केन्द्रीय समितिका कुराहरुलाई ?
तपाईंहरुले यो माइक मतिर किन तेर्स्याइराख्नु भएको । यसैगरी सुन्नुहुन्छ । प्रविधिको कुरा यतिधेरै विकास गर्नुभएको छ । साथीहरु के भाको ?
बैठकको सुरुवातमा उहाँले दुई घण्टाभन्दा लामो भाषण गर्नुभयो । तर, नेता कार्यकर्ताको कुरा सँगै बसेर सुन्नुभएन नि ?
लाइभ सुनिरहनुभएको छ प्रधानमन्त्री जीले । टेक्नोलोजी छ नि ।
सरकारको अलि धेरै नै आलोचना भइरहेको छ भन्ने कुरा आइरहेछ । कुरा के हो ?
मैले बताइसकेँ । सरकारको आलोचना केही साथीहरुले अलि गर्नुभाछ । तर, सबै साथीहरुले गर्नुभएको छैन । मलाई लाग्छ कतिपयले थाहा नभएर पनि आलोचना गर्नुभएको छ । कतिपय बुझेर पनि हुन्छ होला । कतिपय अरु केही जस्तै विरोध गर्दै पर्ने कारणले पनि हुन्छ होला । किनभने सबै कुराको रिफ्लेक्सन हुन्छ नि । स्वतन्त्र बहसहरु भइरहेका छन् । व्यक्तिगत रुपमा हुन्छ । त्यसलाई संस्थागत गर्दा स्वभाविकरुपमा तथ्यपरकताको आधारमा उभिएर नै निचोडहरु निकालिन्छ । यो स्वभाविक हो । कम्युनिष्ट पार्टीमा यस्तो हुन्छ जहाँ डेमोक्रेसी छ । जनवाद हुन्छ नि त्यसमा । केन्द्रीय समितिको सदस्यहरुको यो थलो भएकोले यहाँ त धेरै कुराहरु हुन्छन् । यहाँ सचिवालय, स्थायी समितिका कुरा त धेरै कम नै सुनिन्छन् नि ।
पार्टीको वैचारिक प्रतिवेदनमा पार्टी कता जाँदैछ भन्ने स्पष्ट कुरा आएन भन्ने गुनासो छ । किन आउन सकेन ?
स्पष्टरुपमा आएको छ । त्यसमा जनताको बहुदलीय जनवाद र २१औं शताब्दिको जनवादको केही संश्लेषण गर्ने भन्ने कुराहरु छन् । त्यसको मोडेल/खाका के हुने त ? अब हामी समाजवादतर्फ हो वा त्यसका अरु केही चरणहरु छन् भन्ने कुरामा बहस हुन्छ । त्यो कुरा त महाधिवेशनमा तय हुन्छ नि । अहिले त साधारण कार्यदिशाद्वारा चल्दै गरेको छ । पार्टी आफैं संक्रमणमा चलिरहेको छ । त्यही भएर आउने वर्ष हुने महाधिवेशनमा सबै कुराहरु निरुपण हुन्छन् सबै मुद्दाहरु । यो चाहिँ यसअवधिमा केन्द्रीय कमिटी, पार्टी नेतृत्वले गरेका कामहरु र सरकारले गरेका कामहरुको समीक्षा गर्ने र नयाँ मार्गदर्शन गर्ने कुरा मात्रै हो ।
पार्टी शीर्ष नेताको छानबिन गर्नुपर्ने र एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने माग पनि बैठकमा उठेछन् । यहाँको धारणा के हो ?
मलाई यस्तो लाग्दैन कि सम्पत्ति कै छानबिन गर्नुपर्ने तहमा कुनै नेताहरुले अकूत कमाएका छन् । प्रश्न त यो पनि उठेको छ नेताहरु व्यापारिक कार्यमा संलग्न हुनुहुँदैन । त्यसो भए जुन पार्टीले ८ लाख मानिसलाई आफ्नो सदस्य भन्छ, ती सबैले काम गरेनन् भने त उत्पादन संघर्ष त खतम हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले केही व्यवहारिक कुरा आउँछन् बैठकमा, केही भावनात्मक कुरा पनि आउँछन् । हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयहरुमा नेताहरु जोडिनु हुन्न, व्यवसायमा भनेका छौं, यो भन्दा अगाडि एउटा नेताले काम छाडेर यो समस्या हल हुन्छ वा हामीले अर्को नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ? नीतिले विषयवस्तुलाई विस्थापित गर्नु चाहिँ विकल्पसहित, प्रणालीसहित स्थापना गरेर नयाँ ठाउँमा जानु चाहिँ राम्रो हुन्छ । होइन भने फलानाले यो व्यवसाय गर्‍यो, त्यसर्थ उसलाई झिकिदियो भने यो शिक्षा क्षेत्र सुध्रिन्छ अथवा अर्कोलाई झिकिदियो भने स्वास्थ्य क्षेत्र सुध्रिन्छ भन्ने तहको कुरा गरेर हुँदैन ।
वर्गको हिसाबले भन्दै आएको हिसाबले सर्वहारा वर्गको पक्षपोषण गर्ने तर, सर्वहारा त चेत हो, दृष्टिकोणको कुरा हो । त्यसैले कोही पनि नेता सर्वहारा छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । हो, सबैको घर छ । कतिपयको गाडी पनि होला । कतिपयको अरु खेतीपाती पनि होला । त्यसैले छानबिन नै गर्नुपर्ने भनेको गम्भीर आशंका पैदा भएमा हो, अभियोग लागेमा हुन्छ । यो व्यक्तिगत हुन्छ नि । आमरुपमा त्यसरी किन हुन्छ ? सम्पत्ति विवरण बुझाउने चलाउने छ ।
कुरा उठाउनु नै गलत भयो त्यसो भए ?
गलत छ भन्दिनँ म । लागेको कुरा उठाउन पाइन्छ केन्द्रीय समितिमा । उठाउनु भयो नि त कसैले । यसैको किन विरोध गर्नुपर्‍यो । त्यसैले समाधान के भन्ने कुरा हो । केही भावना पनि जोडिएर आएका कुरा हुनसक्छन् ।
एमसीसीबारे नि ?
मैले प्रष्ट बताइसकेको छु । हामीले कुनै पनि देशको परियोजनालाई हेर्दा प्रतिवेदनले परियोजना छामेर हेर्न मिल्दैन । त्यो इभेन्ट हुन्छ । अर्को परियोजना सम्झौता होला नि बीचमा कुनै अर्को देशसँग । फेरि प्रतिवेदनमा त्यो कुरा उल्लेख हुन्छ र ? त्यो कुरा हेर्ने सरकारले हो । यसरी हेर्दा अमेरिकाले हामीलाई दिएको के हो ? जम्मा जम्मी ग्रान्ट हो । कति वर्षको लागि ? ५ वर्षको लागि । के कामको लागि ? विद्युतको प्रसारण लाइन सवलीकरण गर्न, विस्तार गर्न र सडक १०० किलोमिटर बनाउन । अनि पैसा कसले हाल्छ? अमेरिकाले हाल्छ ५० करोड डलर । हामी हाल्छौं १३ करोड डलर । त्यसको मनिटरिङ कसले गर्छ ? त्यो काम लेखापरीक्षण नेपालले गर्छ । ६/६ महिनामा हामी आफैं गर्छौं । अनि एउटा कुरा के आएको छ भने बौद्धिक सम्पत्तिको सवाल । पुलको डिजाइन उसले बनायो भने उसको होला डिजाइनमाथिको बौद्धिक सम्पत्तिमा हक । अथवा एमसीसी कमिटीको हुनेछ जहाँ संयुक्त कमिटी छ । यस्ता कुराहरुमा बहस गर्नुको जरुरत छैन । यस्ता विरोध गर्ने हो भने हामीले कसैको पनि सहुलियत लिनु हुँदैन । मैले भन्ने गरेको छु, एक्जिम बैंक भारतको कति छ शर्त ? अमेरिकामा त त्यस्ता शर्त छैनन् । उसको यति प्रतिशत सामग्री नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले ५ वर्षको योजना लिने हो । मजाले चलाउने हो । फाइदा लिने हो नेपालले । मज्जाले आर्थिक प्रगति गर्ने हो ।
बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्य एमसीसीको विरुद्धमा छन् भन्ने सुनिएको छ । कसरी पास गराउनुहुन्छ ?
मलाई नै देख्नुभयो । मजस्ता कति छन् । तपाईंले भोटिङ गराउनुभयो ? मतदान भयो यसमा । यस्तो आवाज एकदम कम छ । तपाईंहरुलाई त्यही कुरा प्रिय लाग्छ । त्यसैले म के भन्न सक्दिनँ भने आम रुपमा यो कुरा बुझ्ने बाँकी भएकोले एकदम ठेट कुरा के छ भने यो पछिल्लो बहस हो । विवाद हो । कसैले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता नै खतम हुन्छ कि ? भन्ने गरी प्रचार गरेको हुनाले अन्यौल भयो । त्यसमा रहेका वास्तविक प्रावधानहरु हेरेर टुंगो लगाइदिनुपर्‍यो । शुक्रबार नै बैठकमा एमसीसीबारे पुस्तक बाँडिएको छ । अध्ययन गर्नुभयो होला । यो जे हो त्यही रुपमा पार्टी नेतृत्वले टुंगो गरोस् भन्ने भएको छ । अस्तिकै सर्कुलरमा यसबारे आइसकेको छ । तपाईंहरु किन पछि पर्नुभएको ?